Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Mozilla Thunderbird 78.3.1 | Site na Linux
Mozilla ewepụtala nke ọhụrụ mbipute de Thunderbird, onye a ma ama na-ezitere akwukwo ozi ruru gi mbipute 78.3.1.
Dị ka anyị maara nke ọma, Thunderbird bụ otu n'ime ndị kasị mma ozi ahịa, kwa enwere onwe gị ma melite ọ bụla na mwepụta ọ bụla.
La mbipute Kacha nso nso bụ 78.3.1 na ka Mozilla kwuru, enwere naanị otu mmelite kachasị na ntọhapụ a.
Ihe nkedo a na-edozi esemokwu kpatara Thunderbird 78.3.0 kwụsịrị na mberede. Así ihe dị ọhụrụ mbipute na-arụ ọrụ dị ka ihe mberede kwachie ma na-agbakwunye kwụsie ike Thunderbird.
N'ime nke ahụ, Thunderbird 78.3.1 na-abịa na ndozi niile nke onye bu ya ụzọ; la Mmeghe OpenPGP a nụchara anụcha, na Mozilla na-eweta mmelite arụmọrụ na mmebi Ozi na interface iji zoo mba ọzọ igodo nwere nkwarụ na ndabara.
Ndị a bụ ndozi na OpenPGP dị na nke a melite:
Nrụ ọrụ arụmọrụ mmebi ozi ogologo
Egosila interface mba ọzọ mgbe igbanwe ya
Mepụta igodo ọhụụ adịghị ahọrọ ya na-akpaghị aka maka ojiji gi
Dị ka ọ dị na mbụ, Mozilla na-atụ aro ka emelite ozugbo enwere ike, ọ bụghị naanị maka mmelite kachasị ọhụrụ kamakwa kwa maka ụfọdụ obere nche fixes. Ọhụrụ version bụ dakọtara na Linux, Windows na Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Mozilla Thunderbird 78.3.1
Nke a bụ sọftụwia nwere ike ijikwa ọtụtụ akaụntụ email site na otu interface?
Ee, kpọm kwem.
Zaghachi Luis Lopez
Site na oge Thunderbird 68 melite.
Gitter na-agagharị na Matrix ma jikọta ya na Element Matrix
Olee otú iji chebe gị wireless ekwentị hackers